Indlela Dlulisa Okuqukethwe kusuka Old iPhone okusha iPhone
Ulitholile yini iPhone entsha? Ingabe ufuna ukuhambisa wonke okuqukethwe kusukela iPhone ubudala kuya kwelisha? Uma ufuna ukwenza lokho, wena umcabango wokuqala ngokuqinisekile usebenzisa iTunes noma ICLOUD, okuyinto indlela esemthethweni. Futhi lesi sihloko sizobonisa wena indlela elula ukudlulisa idatha kusuka iPhone yakho endala ku-iPhone yakho entsha.
1. Dlulisa idatha ku-iPhone entsha usebenzisa iCloud
2. Dlulisa idatha ku entsha iPhone usebenzisa iTunes
3. Zama ezinye izindlela ukudlulisa idatha ku-iPhone entsha
Yenza isipele iPhone yakho yamanje usebenzisa iCloud
1. Xhuma iPhone yakho endala ku-intanethi nge-Wi-Fi. Bese uchofoza u-Amasethingi > ICLOUD > isipele.
2. Qiniseka ukuthi iCloud Isipele ivuliwe.
3. Thepha Emuva Up Manje. Hlala uxhumekile kwi-Wi-Fi phakathi kwenqubo.
4. Size siqede, ungabona isipele nge usuku kanye nosayizi kokuthi Izilungiselelo > ICLOUD > Storage > Phatha Isitoreji. Funda Lokho iCloud uyahlehla.
Dlulisela iCloud zakho zokulondoloza ku-iPhone yakho entsha
1. Vula iPhone yakho entsha. Uzobona "Sawubona" ??isikrini.
Inothi: Uma usuqedile ukusetha i-iPhone yakho entsha kakade, sicela uthephe okuthi Amasethingi > General > Hlela kabusha > Sula Konke kanye Izilungiselelo. Wena iPhone izoqalisa phansi bese uzobona "Sawubona" ??isikrini.
2. Swayiphela ukulandela izinyathelo uze ubone isikrini-Wi-Fi. Yenza iPhone yakho entsha ukuze ujoyine inethiwekhi ye-Wi-Fi.
3. Qhubeka ukulandela izinyathelo uze ubone Apps & isihenqo idatha, bese wengeza i-Buyisela kusuka ICLOUD Backup > Next. Uzocelwa ukuba ufake Apple ID yakho nephasiwedi.
4. Khetha isipele osanda kulenza. Hlala uxhumekile kwi-Wi-Fi bese ulinda sokubuyisela ukuqedela. Kuzothatha isikhathi esithile, incike ubukhulu ifayela yokusekelayo kanye ijubane inethiwekhi.
Yenza isipele ubudala iPhone usebenzisa wakho we-iTunes
1. Xhuma iPhone yakho yamanje kwikhompyutha yakho.
2. Vula iTunes futhi uqiniseke ukuthi unenguqulo yakamuva.
3. Khetha idivayisi yakho bese uchofoze Ifayela >Amadivayisi > Dlulisela Ukuthenga ukulondoloza okuqukethwe oyilandile kusukela iTunes Store noma App Store. Linda kuze inqubo eqeda.
4. Chofoza Emuva Up Now ne ulinde isikhashana kuze inqubo uqeda. Ungabona isipele iTunes Izintandokazi > Amadivayisi.
Dlulisa isipele iTunes ku-iPhone yakho entsha
1. Vula iPhone yakho entsha bese uxhuma computer ukuthi agcinwe ocingweni lakho le-iTunes kuwo.
2. Landela izinyathelo uze ubone isikrini-Wi-Fi. Bese uchofoza u-Connect-iTunes.
3. Landela izinyathelo uze ubone Apps & isihenqo idatha, bese wengeza i-Buyisela kusuka ku-iTunes Backup > Next.
4. Faka Apple ID yakho nephasiwedi.
5. Khetha isipele wenza bese ulinda inqubo uqeda. Uma isipele lwakho lubhalwe ngemfihlo, uzocelwa ukuthi ufake iphasiwedi.
6. Vumelanisa noma yikuphi okuqukethwe wayengekho isipele sakho iPhone usebenzisa iTunes.
Ezinye izindlela ukudlulisa idatha ku-iPhone entsha
Ngaphandle iTunes futhi iCloud, singasebenzisa ezinye amathuluzi ukudlulisa idatha yakho.
MobileTrans buyindlela ukudluliswa kwedatha okulula ukusetshenziswa. Kungaba uthumele konke kusuka kudivayisi eyodwa kuya kwenye idivayisi okukodwa. Futhi isekela Android, iOS, Windows Mobile ngisho BlackBerry. Ngakho uma nje uthole smartphone entsha, futhi leli thuluzi ingakusiza ukuze uthumele oxhumana, imiyalezo, Amalogi Call, ikhalenda, izithombe, imiqophi, umculo nezinhlelo zokusebenza kusuka kufoni yakho endala komunye yakho entsha.
AnyTrans kuyinto iOS okuqukethwe ohlelweni imenenja ukuthi ungadlulisa okuqukethwe phakathi amadivayisi akho iOS. Isekela zonke izinhlobo zedatha: othintana, izithombe, umculo, imiyalezo, Amanothi, ikhalenda, ngisho izilungiselelo ngezifiso njengezibuyekezo lodonga, iCloud akhawunti, imisindo, Izinhlelo zokusebenza, ngisho idatha yohlelo lokusebenza futhi umdlalo konga, njll.
Indlela ukudlulisa Data esuka iPhone kuya Galaxy S5
Indlela ukudlulisa Music kusuka Android kuya iPod
Indlela ukudlulisa Data esuka iPhone kuya Samsung Galaxy S4
Indlela ukudlulisa izithombe kusuka iPhone kwikhompyutha
Indlela ukudlulisa umculo kusuka iPod kwikhompyutha
Posted on November 24, 2015 May 28, 2016 Umbhali WillIzigaba EhambayoAmathegi Ukudlulisa idatha ye-iPhone, ukudluliselwa ifoni, Ukudlulisa okuqukethwe kusuka Iphone ubudala kuya iphone entsha
Langaphambilini post Previous: Indlela impande Google Nexus 5 e One Click
Next post Next: Indlela Phinda Isuse Amanothi kusuka ku-iPhone